I-Penguin Tetras Intlanzi | Ngeentlanzi
Los Iintlanzi zeTetra Penguin, ekwabizwa ngokuba yi-Thayeria Boehlkei okanye i-oblique tetras, yeyosapho lakwaCharacidae kwaye ivela kwilizwekazi lase Mzantsi Melika, kanye ukusuka eBrazil nasePeru, apho imilambo iAmazon kunye neAraguaia inamanzi amnandi kwaye azolileyo anezityalo ezininzi ezibenza baphile cwaka. Ezi ntlanzi zincinci zinokufikelela kubukhulu obufikelela kwiisentimitha ezi-6 ubude, zinomzimba obhityileyo kwaye omde. Zihlala zimhlophe ngokwesilivere kunye nebhanti emnyama ebaleka umzimba wonke. Ezi ntlanzi zibonakaliswa yindlela yazo yokubhukuda kuba ziyenza ngendlela ethambeleyo.
Ukuba ucinga ezi ntlanzi kwi-aquarium yakhoKuya kufuneka uyazi ukuba zizentlalontle kakhulu, zizolile kwaye zinobuhlobo izilwanyana, ke kufuneka zihlale kwi-aquarium kunye nezinye iintlobo zeentlanzi ezabelana ngeempawu ezifanayo nezazo. I-Oblique Tetras ayivelisi milo okanye iingxabano ngaphakathi echibini, ukuze ube nezinye izilwanyana kwi-aquarium. Ndicebisa ukuba okungenani ube neekopi ezi-6 okanye ezisi-7 ukuze izilwanyana zizive zikhululekile kwaye zikhululekile.
Khumbula ukuba i-aquarium kufuneka okungenani ibe ziisentimitha ezingama-50 ubude, ngelixa ubushushu buphakathi kwama-22 nama-28 degrees celcius. I-pH yamanzi kufuneka ibe phakathi kuka-5,8 no-7,5 kwaye ubunzima mabungagqithi kuma-20. Gcina ukhumbula ukuba umhombiso wedike, wokulinganisa Indawo yokuhlala yale ntlanziInezityalo ezininzi, zombini izityalo ezidadayo ezicoca ukukhanya, kunye nobulembu, ukongeza umhlaba kufuneka ubemnyama kwaye uyisanti.
Kubaluleke kakhulu ukuba, nangona sinezinto ezininzi utyani kwi-aquarium, masishiye iindawo ezikhululekileyo ukuze izilwanyana zidade ngokukhululekileyo kwaye zingadibani nezithintelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Iintlanzi zeTetras Penguins